DGSR : Tsy azo ampiasaina intsony ny jiro LED
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2021 → octobre → 27 → DGSR : Tsy azo ampiasaina intsony ny jiro LED
Nanatanteraka hetsika fitsirihana tampoka an-dalambe ny teo anivon’ny Foibe fitsaràna fiarakodia (DGSR) nandritra ny tapabolana teto Antananarivo Renivohitra sy ireo lalam-pirenena mivoaka mihazo ny faritany. Anisan’ny nampiavaka ny hetsika tamin’ity indray mitoraka ity ny fampahafantarana sy ny fanentanana ny tsy fahazoana mampiasa ny jiro LED. 2718 amin’ireo fiara voasava nandritra ny hetsika. Nahatratra 34 ireo nampiasa jiro barre “LED” nasaina nanala izany avy hatrany.
406 ireo taratasim-piara nosintomina. 56 noho ny tsy fisiana na fahalanian’ny paikandro fitsirihana ara-teknika (défaut et visite technique expire), ka naiditra ambalam-pamonjana (mis en fourrière). Fiara roa no tratra nampiasa hosoka fitsirihana ara-teknika ka hatolotra tsy ho ela ny Fitsarana ireo tompon’antoka aorian’ny famotorana. 312 tamin’ireo no tsy maintsy natao “INAPTES” noho ny tsy fahatomombanana ara-teknika, ka 44 ireo fiara mamoaka setroka diso tafahoatra manimba ny tontolo iainana. 24 no fiara ratsy endrika ivelany sy anatiny ka tsy maintsy hatsaraina. 64 ireo fiara nasaina nanala teo no ho eo ny “pellicules” matroka manarona ny fitaratra. Dimy ireo fiara tratra nampiasa ireo “attestation de déclaration de perte”. Fiaram-panjakana 60 no nosavaina ka ny 28 tamin’ireo tsy mbola nahavita ny fitsirihana ara-teknika.
“Nisy ny fanentanana ireo mpamily nandritra ny fisavana ny amin’ny tsy tokony hampiasana ireny jiro LED ireny sy ilay antsoina hoe « vitres fumées » izay hanaovana antso avo ho an’ny mpitandro filaminana toy ny zandary sy polisy manao fisavana anaty sakana (Police des routes) ary ny tokony hitandreman’ny tsirairay amin’ny familiana, satria “LAHITOKANA NY AINA”. Tsara ny mampahafantatra fa ny 85% amin’ny loza niseho dia vokatry ny tsy fitandremana avy amin’ny mpampiasa lalàna, indrindra fa ny mpamily, raha 10% no voamarina fa vokatry ny tsy fahatomombanana ara-teknika, ary ny 5% kosa vokatry ny haratsian’ny lalàna”, hoy ny fanazavana avy amin’ny DGSR. Manentana ny rehetra ireto farany mba hitondra ny fiarany eny amin’ireo Ivontoerana fitsarana fiarakodia akaiky azy hanao fitsirihana ara-teknika ho antoky ny fiaranao ary kojakojao mandrakariva ny fiara hisorohana ny loza tampoka.
Tahina 27 octobre 2021 at 10 h 29 min · Edit
Ireny fiara manao vitres fumées ireny koa tokony ho esorina , be dia be izy ireny na any @ faritany nefa tsy mpitondra fanjakana ambony fa ohatra entrepreneur tsotra , Mpivarotra , sns fa fantatr’ireo police mpisava ao amin’ny tanana dia tsy voa rara.